नयाँ COVID स्ट्रेन Omicron सँग कसरी यात्रा गर्ने?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » संघ समाचार » नयाँ COVID स्ट्रेन Omicron सँग कसरी यात्रा गर्ने?
अफ्रिकी पर्यटन बोर्ड • संघ समाचार • ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • क्यारिबियन • सरकारी समाचार • स्वास्थ्य समाचार • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • मान्छे • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
विश्व पर्यटन सञ्जालका अध्यक्ष डा. पिटर टार्लो, जो कलेज स्टेसन, टेक्सास प्रहरी विभागका पादरी पनि हुन्, र ट्राभल एण्ड टुरिज्म सेफ्टी एण्ड सेक्युरिटीका विशेषज्ञ हुन्, पर्यटनको विश्वका लागि सल्लाह छ: यो आत्तिने समय होइन, तर यो तपाईको दिमाग प्रयोग गर्ने समय हो।
यो सल्लाह ओमिक्रोन वा प्राविधिक रूपमा B.1.1.529 भेरियन्टको रूपमा चिनिने कोरोनाभाइरसको अर्को स्ट्रेनबाट विश्व जगाएको दुई दिन पछि आएको हो।
यो विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व नेताहरूलाई घुँडाको झटका प्रतिक्रियाहरूमा संलग्न नहुन अनुरोध गरेको थियो र ओमिक्रोनको बारेमा समाचारहरू देखा पर्दा यात्रा प्रतिबन्ध लगाउने विरुद्ध चेतावनी दिएका थिए।
यसले विशेष गरी विश्व पर्यटन उद्योगलाई क्षति पुर्याएको छ जुन समयमा रिकभरीको उज्यालो उज्यालो चम्किरहेको थियो। लन्डनमा विश्व यात्रा बजार वा लस भेगासमा IMEX भर्खरै सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आशावादको भावनाले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू, होटल खोल्ने र विश्वमा पर्यटन प्रवर्द्धनहरू सुरु गर्यो।
यो आशावाद दुई दिन अघि मात्रै घन्टामा नष्ट भयो जब युरोपेली देशहरूले तुरुन्तै दक्षिणी अफ्रिकाको यात्रा बन्द गर्न थाले। राष्ट्रपति बिडेनद्वारा निर्देशित अमेरिकी यात्रा प्रतिबन्ध पछि यो थियो।
द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार दक्षिण अफ्रिकी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग मन्त्रालय, नयाँ स्ट्रेन पहिलो पटक बोत्सवानामा, दोस्रो दक्षिण अफ्रिकामा पत्ता लागेको थियो।
यो पहिले नै जर्मनी, नेदरल्याण्ड्स, हङकङ, अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा यात्रुहरू द्वारा ल्याइयो। एक दिन भित्रको यो भाइरस अब एक पृथक दक्षिण अफ्रिकी मुद्दा होइन।
युनाइटेड किंगडम लगायतका देशहरूले केही घण्टाभित्रै सीमा बन्द गर्ने, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकाबीचको उडान रद्द गर्ने प्रतिक्रिया दिए पनि यसले यो भाइरसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फैलिनबाट रोक्न सकेन। यो युरोप र हङकङमा पहिले नै थियो, बाँकी विश्वलाई पनि थाहा थिएन।
न्यूयोर्क राज्य, दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाले यस नयाँ भाइरस तनावको आधारमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्‍यो, यद्यपि उनीहरूमा शून्य केसहरू छन्।
दक्षिणी अफ्रिकामा उडानहरू प्रतिबन्ध गर्ने यो प्रवृत्तिले अब दक्षिणी अफ्रिकालाई अलग गर्दैछ, यसको यात्रा र पर्यटन उद्योग बन्द गर्दैछ। आज मात्र कतार र सेशेल्सले पनि सीमाना र हवाई सम्पर्क बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
तथापि, साउदी अरेबियाले भर्खरै घोषणा गर्‍यो कि यसले सबै देशका यात्रुहरूलाई प्रवेश अनुमति दिनेछ, जबसम्म उनीहरूले COVID-19 खोपको एक खुराक पाएका छन्। यद्यपि, राज्यले दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, लेसोथो र इस्वाटिनीको उडानहरू स्थगित गरेको छ।
नेदरल्यान्ड्स र अन्य धेरै देशहरू बन्द छन्।
… तर कसरी?
UNWTO महासचिव जुराब पोलोलिकासभिलीका सल्लाहकार अनिता मेन्डिरट्टाले हिजो आफ्नो मालिकको लागि यो ट्वीट लेखे, जुन उनले आफ्नो ट्विटरमा प्रकाशित गरे:
अनुभवले देखाएको छ कि जोखिममा आधारित, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाने बाटो हो: पर्यटनको जीवन रेखालाई नछोडिकन मानिसहरूलाई सुरक्षित राख्न।
यात्रा प्रतिबन्धले सम्पूर्ण देशहरू र क्षेत्रहरूलाई कलंकित गर्छ, रोजगारीलाई खतरामा पार्छ, र विश्वासलाई हानि पुर्‍याउँछ। तिनीहरू अन्तिम उपाय हुन्, पहिलो प्रतिक्रिया होइन।
जाहिर छ, यात्रा गर्न मन पराउने, वा यात्रा सेवाहरू प्रदान गर्ने जो कोहीले म्याड्रिडमा अझै रद्द नगरिएको UNWTO महासभाको केही दिन अघि गरिएको जुराबको कथनसँग सहमत हुनुपर्दछ, तर त्यस्ता शब्दहरूको कुनै हातमा समाधान हुँदैन।
विश्व पर्यटन सञ्जालले नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, वैज्ञानिक शास्त्रमा आधारित, र यात्रा र पर्यटन कार्य गर्ने लक्ष्य।
यो WTN सिफारिस सबै देशहरूद्वारा खोपमा पहुँचमा समानताको लागि संगठनको धक्काको अतिरिक्त हो। र यात्रा गर्न खोप आवश्यक छ.
यो हुन सक्दैन कि त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोप मा पर्याप्त खोप छ, 30 वा अधिक प्रतिशत अस्वीकार दर संग, जबकि अफ्रिका को धेरै भागहरु मा औसत 7% मात्र खोप छ, र मानिसहरू यो जीवन पहुँच प्राप्त गर्न हताश छन्। - खोप बचाउने।
खोपको उपलब्धताको कारणले गर्दा कम खोप दर धेरै क्यारिबियन राष्ट्रहरू सहित अमेरिकी सीमाहरूबाट केही माईल टाढा रहेका देशहरूमा पनि सत्य हो।
यो विश्व पर्यटन नेटवर्क UNWTO, WHO, WTTC, IATA, सरकारहरू, र ट्राभल उद्योगलाई समस्याको शीर्षमा पुग्नको लागि अलिकति फरक बाटो खोज्न आग्रह गरिरहेको छ। WTN ले यो दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण यात्रा र पर्यटन उद्योगलाई नष्ट गर्दैन, र यस उद्योगलाई COVID-19 सँग काम गर्न र समृद्ध हुनको लागि आशावादी दृष्टिकोणलाई अनुमति दिनेछ भन्ने लाग्छ।
यस्तो दृष्टिकोणले इजरायललगायत केही देशहरूमा काम गरिरहेको छ।
प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय उडान अघि एयरपोर्टमा वा प्रस्थान गर्नु अघि 24 घण्टा भित्र द्रुत पीसीआर परीक्षण आवश्यक पर्दछ, पूर्ण खोप लगाएकाहरूका लागि पनि।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सवार सबैलाई पूर्ण खोप लगाइएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
इन्फ्लुएन्का एक प्रकारको कोरोनाभाइरस हो र प्रायः COVID-19 सँग छुट्याउन सकिँदैन, यात्रुहरूलाई फ्लूको मौसममा विशेष गरी फ्लू खोप लगाउन अनिवार्य बनाउनुहोस्।
द्रुत PCR परीक्षण Covid-19 को परीक्षणको लागि नयाँ विधि हो जुन हालै FDA द्वारा अनुमोदन गरिएको थियो। द्रुत पीसीआर परीक्षणहरू कोविड परीक्षणको एक रोमाञ्चक नयाँ रूप हो किनभने तिनीहरूले द्रुत परीक्षणको द्रुत टर्नअराउन्ड समयसँग पीसीआर परीक्षणको शुद्धता संयोजन गर्दछ। यी Covid परीक्षणहरूले परिणामहरू प्रदान गर्न सामान्यतया 15 मिनेट मात्र लिन्छन्।
द्रुत PCR परीक्षणहरू छिटो सही नतिजाहरू चाहिने जो कोहीका लागि एक आदर्श विकल्प हो, जस्तै कि जो कोही प्रस्थानबाट 15 मिनेट भित्र यात्राको लागि परिणाम चाहिन्छ, वा कोभिड-१९ लक्षणहरू अनुभव गर्दा।
द्रुत पीसीआर परीक्षण नाक स्वाब निदान हो। तिनीहरूले भाइरससँग सम्बन्धित विशिष्ट आनुवंशिक सामग्रीहरू पत्ता लगाएर काम गर्छन्। पीसीआर परीक्षणहरूले एन्टिजेन परीक्षणहरू जस्तै भाइरसको सतहमा पाइने प्रोटीनहरू खोज्नुको सट्टा आणविक स्तरमा भाइरस भित्र पाइने सामग्री खोज्छ।
र्‍यापिड पीसीआर परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको २४ घन्टा भित्रमा मानक बन्नुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि जाँच गर्दा विमानस्थलहरूमा उपलब्ध हुनुपर्दछ।नयाँ विश्व पर्यटन नेटवर्क हो सिफारिस।
यस्तो दृष्टिकोणको साथ UNWTO महासचिव द्वारा अन्तिम उपायको रूपमा यात्रा प्रतिबन्ध प्रयोग गर्ने शब्दहरू थप यथार्थवादी हुन्छन्।
यो बिना, प्रत्येक देशले आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षाको लागि आपतकालीन ब्रेक तान्नेछ। धेरै जसो अवस्थामा, यो धेरै ढिलो हुन्छ, एक वा दुई दिन भित्र गरिएमा, वा नयाँ तनाव बुझ्नको लागि पर्खँदा पनि।
WTN अध्यक्ष डा पीटर टार्लो भन्छन्:
‘यस अवस्थाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। आत्तिने समय छैन, हामीले आफ्नो दिमाग प्रयोग गर्नुपर्छ र यो उद्योग, स्वास्थ्य र सरकारलाई एउटै पृष्ठमा ल्याउनु पर्छ।
यस दृष्टिकोणले सबै भागहरूमा ठूलो प्रयास लिन्छ। साउदी अरेबिया लगायतका देशहरूले वर्ड टुरिजममा अगुवाइ गर्दै आएका थिए र पैसालाई राम्रा विचारहरू पछाडि राखेका थिए।
संसारको जुनसुकै ठाउँमा उपलब्ध गराएर प्रणाली कार्यान्वयनमा लगानी गर्ने समय आएको छ।
यो आवश्यक छ, त्यसैले हामी सबै सुरक्षित छौं, र कोविडसँग सम्बन्धित नयाँ स्वास्थ्य खतराहरू देखा पर्दा पनि यात्रा र पर्यटन समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न।